Salesre ahịa na ire ahịa: Amụma ndị dị elu maka Ọdịnihu | Martech Zone
N'oge na-adịbeghị anya anyị nwere ọmarịcha Ajụjụ ọnụ nke Giles House otu n’ime isiokwu nke mkparịta ụka ahụ bụkwa ire na ire ahịa. Ọhụrụ na ajụjụ ọnụ ahụ, N'ime na nso nso a bipụtara amụma ndị a maka nhazi na ahịa. Ha dabere na akwụkwọ ọhụrụ ahụ, Ejikọtara Iji Mezuo: Otu esi eme ka ndị ahịa gị na ndị ahịa gị dị n'otu ka ha nwee ike ịlụ maka uto, nke InsideView's CMO Tracy Eiler dere, yana VP nke Enterprise Sales Andrea Austin.
Amụma ndị ahụ dabere na nyocha nke 1,000 ndị isi ahịa na ịzụ ahịa. Nchọpụta nke Eiler na Austin na-egosi na nsogbu nke mwepụta na-aga n'ihu na-eto ma nkwụsị na-enwe mmetụta kpọmkwem na nbata.
Salesre ahịa na ịzụ ahịa ahịa bụ nsogbu mkpọmkpọ ọkụ na ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na idozi otu ugboro. Ọ bụghị sọsọ ka ire ahịa na ire ahịa ghara ịnọ n’akpịrị; ọ bụ n'ihi na itinye n'ọnọdụ sụgharịrị ka revenue na ngwa ngwa ibu. Yabụ, gịnị na-esote? Mgbe ọnwa nke mkparịta ụka na ndị ọgbọ, anyị na-ebu amụma ebe anyị chere na nhazi ga-aga ka ụlọ ọrụ nwee ike ịga n'ihu. Tracy Eiler, CMO nke InsideView
Ndị ode akwụkwọ na-enye amụma asaa ndị a maka ọdịnihu nke ahịa na itinye aka na ahịa ka ụlọ ọrụ na-ahụ uru dị n'iche ahịa na ire ahịa ma kwadebe ịbawanye mbọ itinye aka na 2017:
Mbilite nke onye na-ere ahia. Ndị ahịa na-aga nke ọma ga-aghọ ndị ahịa ngwakọ. Ka ọ na-erule afọ 2020, mkpa ndị ahịa B2B ga-agbanwe ka ha chọkwuo "onye na-ere ndụmọdụ," ka Forrester Research kwuru. Ndị na-azụ ahịa na-emekwu nyocha n'onwe ha, ha anaghịzi achọ ndị na-ere ahịa na-ere ahịa, ya mere, ụdị ahịa ọdịnala ga-edozi. Ndị na-ere ahịa ọhụụ a ga-abụ ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ ha, ngwaahịa, onye na-azụ ahịa, na njem ndị ahịa, ha ga-achọkwa nkwado ahịa n'ụzọ ahụ. Industriesfọdụ ụlọ ọrụ ga-ebido jikọta ahịa na ire ahịa n'otu otu.
Ọzụzụ obe ga-abụ ihe dị oke mkpa. Ndị ọrụ kachasị chọọ bụ ndị na-achọ ahụmịhe gafere ikike ha nwere, gụnyere ndị na-ere ahịa na-aghọta ahịa na ndị na-azụ ahịa azụmaahịa. Companieslọ ọrụ na-aga n'ihu ga-emezigharị ma gbaa mbọ na-enye ọzụzụ na ebe ọrụ.
Ọkụ ahụ ga-abụ ụzọ bụ isi esi atụle arụmọrụ ahịa.Dabere na nyocha InsideView, pasent 66 nke ndị na-ere ahịa na-ekwu na pipeline bụ ụzọ bụ isi esi atụ ha. Companieslọ ọrụ dị elu ga-amalite na-eleba anya n'ego ndị otu na-enweta, ebe otu akụkụ nke ihe ọ bụla a na-ere ahịa ga-abụ ibu ọrụ nke ahịa. Azụmaahịa na-agbasi mbọ ike ịrụ ọrụ na mmekorita ọ bụla na nzaghachi ọ bụla ruo n'ókè ha nwere ike ịkọwapụta mmetụta ha na-emetụta kpọmkwem oke nke onye ahụ.
Ndị njem niile na-azụ ahịa ga-abụ ihe ndekọ. Ebumnuche ABM na-aga n'ihu karịa itinye ego azụmaahịa ndị ọzọ, na -emepụta ụdị ihe ịga nke ọma nke na-agaghị ejedebe n'ahịa na ire ahịa n'ọdịnihu. Jikere maka ụlọ ọrụ na-ebute ihe ndekọ ahụ ụzọ ihe nile.
Usoro data ndị ahịa na-aghọ ihe dị mkpa. Nchọpụta ụlọ ọrụ na-egosi na azụmaahịa ndị na-etinye data n'etiti etiti azụmaahịa na mkpebi ire ahịa ha na-eme ka ROI dị elu site na 15 ruo 20% (Winterberry Group). Iji nwee ike ịzụ ahịa azụmaahịa na azụmaahịa teknụzụ ahịa, ụlọ ọrụ na-aga nke ọma ga-ebute mbọ iji dozie ma kwado usoro teknụzụ ha na atụmatụ data ndị ahịa. Ime nke a ga - eme ka ụlọ ọrụ nwee ike mebe mmekọrịta, ọgụgụ isi nke ndị ahịa nke na - enyere ha aka itinyekwu aka.
Millennials nwere isi mmetụta. Na 2016 Millennials karịrị Baby Boomers dị ka ọgbọ kachasị nwee ndụ na mba. Nke ahụ pụtakwara na ha na-agbanwe etemeete na nka nke ahịa. Millennials bụ ihe azụmaahịa, mgbanwe, na imekọ ihe ọnụ. Ha nwekwara atụmanya dị iche iche maka agụmakwụkwọ, nkwukọrịta, na ọganihu ọrụ. Companieslọ ọrụ ndị na-aga nke ọma ga-amalite ịhazigharị usoro nhazi ha iji dọta ma jigide ikike kacha mma nke ọgbọ a, ma tụlee ma ndị aga-eme nkwadobe maka ịkwado dịka akụkụ nke usoro ego. Na puku afọ iri taa bụ ndị na-azụta echi. Ndị ụlọ ọrụ ga-eme mgbanwe maka ụdị ha.
Ọmụmụ ihe na-ejide. Itieslọ akwụkwọ mahadum ga-elele mmemme B2B dị ka ihe dị mkpa maka ịkwadebe ụmụ akwụkwọ maka ụwa n'ezie, na ire ahịa, ahịa, na ihu data. Na-atụ anya ịhụ ọtụtụ mahadum na-enye ogo na ahịa, ọ bụghị naanị ahịa ma ọ bụ nyocha. Ọzọkwa, ọtụtụ ụlọ ọrụ ga-eme ka ogo ahịa ha dị ugbu a karịa ahịa ndị ahịa iji lekwasị anya na B2B. N'ikpeazụ, na-atụ anya ka ndị ahịa na-elekwasị anya na sayensị na data data na data nchịkọta dị ka data na-adịwanye mkpa maka ịga nke ọma azụmaahịa.
Nke a bụ infographic, Amụma 5 kacha elu maka Ọdịnihu nke Ahịa & Mgbasa ahịa:
InsideView na-eme mkparịta ụka azụmahịa nke ụwa, na-enyere ihe karịrị ụlọ ọrụ 20,000 aka ịkọwapụta atụmatụ ha ịga-ahịa site na olu nwere ike ịdabere na atụmatụ ọzọ. Na-eduga ya ọgụgụ isi ahịa ikpo okwu na enyere ndi na ere ahia na ndi ahia aka ngwa ngwa choputa ma tozuo ihe ndi kachasi nma, tinye aka na ndi ozo, mechie ndi ahia karie ma gbasaa akuko. InsideView bụ naanị ụlọ ọrụ na-amalite site na ụlọ ọrụ kachasị ezi ụlọ ọrụ na data kọntaktị ma bulie ya site na nghọta azụmaahịa dị adị na ezigbo njikọ.
Tags: ahia dabere na ahịaahịa ndụmọdụna-ere ndụmọdụCRMọzụzụahịa dataitinye n'ọnọdụ ahịaarụmọrụ ahịapipelineitinye n'ọnọdụ ahịaire ahia na ire ahiaire na ire ahịaarụmọrụ ahịa
Genlọ ọrụ na-ezughị ezu na-agwa atụmanya ije ije